बाढीपीडित किसानको खातामा ८० करोड : कुन जिल्लामा कति ? – Everest Dainik
बाढीपीडित किसानको खातामा ८० करोड : कुन जिल्लामा कति ?
काठमाडौं, असोज २६ । तराईमा आएको बाढीले क्षति बेहोरेका किसानलाई कृषि विकास मन्त्रालयले १ अर्ब २५ करोड ५ लाख ६० हजार रुपैयाँ राहतका लागि पठाएको छ । त्यसमध्ये करिब ८० करोड रुपैयाँ अनुदान किसानको खातामा पुग्नेछ । २६ साउनदेखि परेको अविरल वर्षापछि आएको बाढीले तराईका २० जिल्लाको कृषि क्षेत्रमा ६ अर्बको नोक्सान गरेको थियो । त्यसलाई तत्काल पूर्ति गर्न प्रभावित क्षेत्रका किसानलाई ८० करोड रुपैयाँ अनुदान प्रवाहका लागि बजेट निकासा भएको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. योगेन्द्रकुमार कार्कीले जानकारी दिए ।
प्राकृतिक प्रकोपले बर्सेनि असर
कृषि क्षेत्रमा डुबान, कटान, बाढी, पहिरो, असिना, सुक्खा, पहिरोलगायतले पछिल्लो चार वर्षमा करिब चार लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा नोक्सानी गरिसकेको छ । सबैभन्दा धेरै सुक्खा र पहिरोले झन्डै २ लाख हेक्टरमा क्षति गरेको मन्त्रालयले जनााएको छ । बाढी, पहिरोले दीर्घकालीन रूपमा खेतीयोग्य जमिनमा असर गर्दै आएको प्रवक्ता कार्कीले बताए ।
मन्त्रीका जिल्लामा धेरै रकम
कृषि विकासमन्त्री रामकृष्ण यादवको गृह जिल्ला धनुषामा सबैभन्दा धेरै राहत रकम निकासा भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार धनुषामा १६ करोड ३२ लाख ५२ हजार रुपैयाँ वितरण भएको छ । यस वर्ष तराईका आठ जिल्लामध्ये धनुषामा सबैभन्दा कम क्षेत्रफलमा रोपाइँ भएको छ । राज्यमन्त्री सरिता प्रसाईंको गृहजिल्ला झापामा १२ करोड १५ लाख १४ हजार रुपैयाँ निकासा भएको छ । आसपासका मोरङ, सुनसरीमा ५–५ करोड रुपैयाँ मात्र निकासा भएको छ । महोत्तरीमा १२ करोड ६९ लाख ३४ हजार, रौतहटमा ११ करोड ४० लाख ८१ हजार र सर्लाहीमा १० करोड २५ लाख ६३ हजार रुपैयाँ निकासा भएको छ ।
कुन जिल्लामा कति रकम ?
पर्सा : ७ करोड १० लाख ५५ हजार
बारा : ६ करोड ३७ हजार
रौतहट : ११ करोड ४० लाख ८१ हजार
सर्लाही : १० करोड २५ लाख ६३ हजार
धनुषा : १६ करोड ३२ लाख ५२ हजार
महोत्तरी : १२ करोड ६९ लाख ३४ हजार
चितवन : १ करोड ५० लाख ९० हजार
रसुवा : १ करोड ८५ लाख ६ हजार
रामेछाप : ५७ लाख ६१ हजार
ललितपुर : १ करोड १९ लाख २२ हजार
झापा : १२ करोड १५ लाख १४ हजार
मोरङ : ५ करोड ४२ लाख ५२ हजार
सुनसरी : ५ करोड ४६ लाख ७५ हजार
सप्तरी : ६ करोड ८ लाख ३१ हजार
सिराहा : ६ करोड २६ लाख ११ हजार
बझाङ : २९ लाख ५९ हजार
दार्चुला : २३ लाख ७१ हजार
बैतडी : १७ लाख ५० हजार
कैलाली : २ करोड ५८ लाख ६० हजार
डोटी : २५ लाख
दाङ : १ करोड ६८ लाख २२ हजार
बाँके : ३ करोड ७४ लाख ३६ हजार
बर्दिया : ६ करोड १ लाख ३८ हजार
रुपन्देही : ८५ लाख ३४ हजार
कास्की : १९ लाख ८३ हजार
बाग्लुङ : १८ लाख ४७ हजार
गुल्मी : ५८ लाख ८७ हजार
नवलपरासी : १ करोड ६ लाख १८ हजार
कपिलवस्तु : १ करोड ७० लाख ६० हजार
तनहुँ : १ करोड ६ लाख ८७ हजार
स्रोत : कृषि विकास मन्त्रालय
ट्याग्स: rakam bitaran